Paul faa ɛpo so de n’ani kyerɛɛ Roma (1-12)
Mframa kɛse bɔɔ ɛpo so hyɛn no (13-38)
Ɛpo so hyɛn no sɛee (39-44)
27 Na wosii gyinae sɛ yɛmfa po so hyɛn nkɔ Italy.+ Enti wɔde Paul ne nneduafo foforo bi hyɛɛ ɔsraani panyin bi nsa. Ná wɔfrɛ no Yulio, na na ofi Augusto asraafokuw no mu. 2 Ná po so hyɛn bi fi Adramitio a ɛrebetu akɔ po so hyɛn gyinabea a ɛwowɔ mpoano wɔ Asia mantam mu no. Enti yɛkɔforoe, ɛnna yetui. Ná Aristarko+ a ɔyɛ Makedoniani a ofi Tesalonika no ka yɛn ho. 3 Bere a ade kyee no, yegyinaa Sidon, na Yulio daa ayamye* adi kyerɛɛ Paul, na ɔmaa no kwan sɛ ɔnkɔ ne nnamfonom nkyɛn mma wɔnhwɛ no. 4 Na yefi hɔ faa ɛpo so, na esiane sɛ na mframa no rebɔ hyia yɛn nti, yɛde yɛn ani kyerɛɛ baabi a ɛbɛma Kipro* agye yɛn afi mframa no ano. 5 Na yɛnam po so faa Kilikia ne Pamfilia, na yegyinaa Mira po so hyɛn gyinabea a ɛwɔ Likia no. 6 Ɛhɔ na ɔsraani panyin no huu ɛpo so hyɛn bi a efi Aleksandria rekɔ Italy, na ɔma yɛforoe. 7 Yedii nna pii wɔ kwan so; yɛbrɛɛ mu paa, na nkakrankakra yebeduu Knido. Esiane sɛ na mframa no rebɔ hyia yɛn nti, na yentumi nkɔ yɛn anim. Ɛno nti, yɛfaa Salmone, baabi a na ɛbɛma Kreta agye yɛn afi mframa no ano. 8 Na yɛde animia faa ɛpo no anoano beduu baabi a wɔfrɛ hɔ Ɛpo So Hyɛn Gyinabea Pa, a ɛbɛn Lasea kurow no. 9 Ná nna pii atwam, na na ɛyɛ hu sɛ yɛbɛtoa akwantu no so, efisɛ na Mpata Da+ akɔnkyen* bere no mpo atwam. Ɛno nti Paul tuu wɔn fo. 10 Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mmarima, mitumi hu sɛ, sɛ yɛtoa akwantu yi so a, nneɛma bɛsɛe, na yɛbɛhwere ade paa. Ɛnyɛ hyɛn no ne emu nneɛma nko na ɛbɛsɛe, na mmom yɛbɛhwere yɛn nkwa* nso.” 11 Nanso, ɔsraani panyin no tiee ɔhyɛnkafo no ne hyɛn wura no asɛm sen nea Paul kae no. 12 Edu awɔw bere a, na awɔw wɔ ɛpo so hyɛn gyinabea hɔ paa. Ɛno nti, nnipa dodow no ara kae sɛ yemfi hɔ nhwɛ sɛ ebia yebetumi akodu Foinise na yɛatwɛn wɔ hɔ ama awɔw bere no atwam a. Foinise yɛ ɛpo so hyɛn gyinabea a ɛwɔ Kreta, na na wutumi fa atifi fam apuei ne anaafo fam apuei kɔ hɔ. 13 Na bere a anaafo fam mframa no bɔɔ brɛoo no, ɛyɛɛ wɔn sɛ, nea wɔabɔ wɔn tirim sɛ wɔbɛyɛ no bɛyɛ yiye. Enti wotuu sɛkyɛ no, na wɔfaa Kreta mpoano kɔe. 14 Nanso ankyɛ koraa na mframa kɛse bi a wɔfrɛ no Eurakilo* bɔe denneennen. 15 Mframa no bɔ hyiaa ɛpo so hyɛn no denneennen, na na entumi nnyina mframa no ano, enti yegyae maa mframa no twee yɛn kɔe. 16 Afei yɛde yɛn ani kyerɛɛ baabi a ɛbɛma supɔw ketewa bi a wɔfrɛ no Kauda agye yɛn afi mframa no ano, nanso yɛbrɛɛ mu ansa na yɛn nsa reka ɔkorow* a ɛbɔ po so hyɛn no to no. 17 Na bere a wɔmaa so baa hyɛn no mu no, wɔde nhama faa po so hyɛn no ase kyekyeree po so hyɛn no denneennen. Na esiane sɛ na wosuro sɛ wɔbɛkɔ akotim Sirti* anwea no mu nti, nhama a na ekura mframatam no mu no, wogow mu maa mframatam no baa fam, na mframa no ara de yɛn kɔe. 18 Esiane sɛ na mframa a ano yɛ den no retotow yɛn denneennen nti, ade kyee no, wofii ase yiyii hyɛn no mu nneɛma no bi tow gui. 19 Na ne nnansa so no, wɔde wɔn nsa yiyii po so hyɛn no ho nneɛma bi tow gui. 20 Owia ne nsoromma ampue nna bebree, na mframa a ano yɛ den* bɔɔ yɛn. Enti anidaso a yɛwɔ sɛ yebenya nkwa no nyinaa sae. 21 Nna pii twaam a na wonnidii. Ɛnna Paul sɔre gyinaa wɔn mfinimfini kae sɛ: “Mmarima, nokwasɛm ni, ɛsɛ sɛ anka mutie m’afotu no. Sɛ moamfi Kreta ansi po so a, anka nneɛma ansɛe amma moanhwere ade saa.+ 22 Nanso, munnya akokoduru, efisɛ mo mu* baako mpo renyera, gye po so hyɛn no nko ara. 23 Anadwo yi, me Nyankopɔn a meyɛ ne dea a mesom no no bɔfo+ begyinaa me nkyɛn, 24 na ɔkae sɛ: ‘Paul, nsuro. Ɛsɛ sɛ wugyina Kaesare anim.+ Na hwɛ! Onyankopɔn de wɔn a wɔne wo te hyɛn yi mu nyinaa akyɛ wo.’ 25 Enti mmarima, munnya akokoduru, na migye di sɛ Onyankopɔn bɛma nea wɔaka akyerɛ me no aba mu pɛpɛɛpɛ. 26 Nanso yɛbɛkɔ akogu supɔw bi mpoano.”+ 27 Anadwo a ɛto so 14 no, na mframa no de yɛn redi akɔneaba wɔ Adria Po no so. Bere a eduu ɔdasum no, hyɛn mu adwumayɛfo no hui sɛ ayɛ sɛ nea wɔrebɛn asaase bi. 28 Na wɔtow susuhama no kɔɔ nsu no ase, na wohui sɛ ɛyɛ abasam* 20. Enti wɔkɔɔ kakra, ɛnna wosusuwii bio hui sɛ ɛyɛ abasam 15.* 29 Ná wosuro sɛ anhwɛ a na yɛakɔhwe abotan so, enti wɔtow asɛkyɛ anan fii po so hyɛn no akyi. Na wɔn yam a, na anka ade akye. 30 Ná hyɛn no mu adwumayɛfo pɛ sɛ woguan fi hyɛn no mu. Enti wɔhyɛɛ da yɛe sɛ wɔrekɔsan asɛkyɛ afi hyɛn no anim, na wogyaagyaa ɔkorow no mu sɛ wɔde resi po no so. 31 Ɛnna Paul ka kyerɛɛ ɔsraani panyin no ne asraafo no sɛ: “Sɛ mmarima yi antena po so hyɛn yi mu a, morentumi nnya nkwa.”+ 32 Ɛnna asraafo no twitwaa nhama a ekura ɔkorow no mu no, na wɔma ɛkɔe. 33 Bere a ade reyɛ akye no, Paul hyɛɛ wɔn nyinaa nkuran sɛ wonnidi, na ɔkae sɛ: “Nnafua 14 ni na moatwɛn denneennen a momfaa aduan biara nkaa mo ano. 34 Enti mesrɛ mo, munni biribi kakra; ɛbɛboa mo, efisɛ mo mu biara nni hɔ a ne ti nwi baako mpo bɛyera.” 35 Bere a ɔkaa eyi no, ɔfaa paanoo, na ɔdaa Onyankopɔn ase wɔ wɔn nyinaa anim. Afei obuu bi, na ofii ase dii. 36 Enti wɔn nyinaa nyaa akokoduru, na wɔn nso fii ase didii. 37 Ná nnipa* a yɛwɔ po so hyɛn no mu yɛ 276. 38 Bere a wodidi mee no, wɔtotow hwiit a ɛwɔ hyɛn no mu no guu po no mu sɛnea emu bɛyɛ hare.+ 39 Bere a ade kyee no, na wonhu asaase no,+ na mmom wohuu mpoano bi wɔ baabi a ɛpo no adidi kɔ asaase no mu,* na wosii wɔn bo sɛ, sɛ ɛbɛyɛ yiye a, wɔde po so hyɛn no bɛkɔ mpoano hɔ. 40 Enti wotwitwaa asɛkyɛ no ma eguu po mu, na bere koro no ara wɔsansan akyerɛkyerɛkwan hama no, na wɔmaa mframatam a ɛwɔ hyɛn no anim no so hwɛɛ mframa no, na wɔde wɔn ani kyerɛɛ mpoano hɔ. 41 Bere a wɔkɔpem anwea bi a esum hɔ wɔ po no mu no, hyɛn no anim timii na ɛkaa hɔ, na n’akyi no de, asorɔkye a na ɛrebɔ denneennen no bubuu no asinasin.+ 42 Enti asraafo no yɛɛ wɔn adwene sɛ wobekunkum nneduafo no, efisɛ na wɔmpɛ sɛ wɔn mu biara beguare aguan akɔ. 43 Nanso na ɔsraani panyin no awe ataa so sɛ obegye Paul nkwa, enti wamma wɔn kwan amma wɔanyɛ nea wɔbɔɔ wɔn tirim sɛ wɔbɛyɛ no. Na ɔka kyerɛɛ wɔn a wobetumi aguare no sɛ wɔntow wɔn ho ngu po no mu, na wonguare nni kan nkɔ asaase so. 44 Wɔn a aka no, ɔkae sɛ wommutubutuw ntaaboo so ne hyɛn no mu nneɛma bi so nni wɔn akyi. Enti yɛn nyinaa duu asaase so dwoodwoo.+
^ Anaa “Kipro supɔw.”
^ Kyerɛ sɛ, mframa a ɛbɔ fi atifi apuei.
^ Ɔkorow ketewa bi a na wotumi de gye nkurɔfo nkwa bere a asiane bi asi.
^ Nt., “ɛnyɛ ketewa.”
^ Anaa “mo mu ɔkra.”
^ Bɛyɛ mita 36 (anm. 120). Hwɛ Nkh. B14.
^ Bɛyɛ mita 27 (anm. 90). Hwɛ Nkh. B14.
^ Anaa “faka.”